China Auto EPP / ETPU / EPO muchina Vagadziri uye Vatengesi | Welleps
能量 吸收 ： 由于 EPP 制品 具有 特殊 的 泡 孔 结构 ， 其 通过 泡 孔 中 的 气气 滞留 和 压缩 作用 来 吸收 逸散 能量 ， 具有 优异 的 抗压 性能
EPP (Expanded Polypropylene) imhando yepamusoro yekuita crystalline polymer / gasi rinoumbwa nezvinhu, riine basa rayo rakanakisa kuve kukurumidza kukura kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza uye zvigadzirwa zvekudzivirira.
Kubata kwesimba: nekuti zvigadzirwa zveESP zvine hunyanzvi hwebhuru pore dhizaini, inogona kutora simba kubva kunze zvakanaka, uye inogona kurwisa-kudzvanya chaizvo.
Kudzokorora: EPP zvigadzirwa zvakanaka kuchinjika zvinogona kushandiswa zvakapetwa, kwete nyore kuputswa.
EPP zvigadzirwa zvinowanzoshandiswa mumotokari indasitiri, senge mota bhamba, mota padivi shockproof yepakati, musuwo, yepamusoro chengetedzo mota chigaro, nezvimwe.
MABASA AIKURU EYI MACHINE
Kugara neyakasiyana saizi chigadzirwa, uyu jekiseni muchina une yakafara masosi ehuvhu ndiro, iyo min, dhayamita iri kutenderera 600 × 800 mm uye iyo max. Dhiimendi inosvika ku1200 × 1400 mm. Muchina uyu une maviri-nhanho hydraulic system, yakamanikidzwa yekudyisa sisitimu, uye yepakati simba sisitimu, zororo damper, inobata-inomanikidza tangi remvura, condensation system, komputa-inodzorwa system, dhijitari maitiro ekudzora system uye imba yemhepo.
Iyi sisitimu haidi chero girizi. Iyo hydraulic cylinder yakaiswa mumativi maviri erondedzero ine kunyange chakuvhuvhu kubaya simba. Iyo isina chinhu dome inogona kubata kupisa. Iko kuvhura kweforoma uye kuvhara kweforoma kunoitiswa necomputer system iyo inogona kuona yakanakisa kudyisa kunyatso. Iyo mold ejection inofamba inodzorwa neiyo ejection system yekupa yakanakisa mhando yeiyo chaiyo chigadzirwa panguva yekuburitsa maitiro.
KURATIDZWA KWEMUDZIMAI UYU
Muchina uyu wakagadzirwa senzvimbo nhatu-yakazaruka yakavhurika nzvimbo. Iyi yakavhurika-nzvimbo dhizaini inosunga iyo mold ichichinja maitiro uye vanoshanda vanogona kuchinja iyo mold kubva kumberi, kumashure uye mativi maviri emuchina uyu. Zvakare, uyu muchina unogona kuiswa wakananga pasi pasina kuseta chero chikuva. Kuchengetedza kuchengetedzeka kwevashandisi, muchina uyu wakagadzirwa nemusuwo wekuchengetedza uye system yekuchengetedza.
Iyi mold inogadzirwa mumatatu-chidimbu cheplata fomati. Mamwe simba anogona kuchengeterwa pasina kuparadzwa uye nekudaro, iyo ndiro yeforoma inogona kushandiswa zvakanyanya. Iwo mapini emutungamiri nepfuti yepfuti yakaiswa mukati meforoma inofamba mahwendefa kuti ive nechokwadi chekuchengetedza kwekushanda. Kuti udzikise iyo nguva yezvidhori, ino sisitimu inopa nekukurumidza kumisikidza kuisirwa kumisikidza uye kuchinja system.
Matanho-maviri hydraulic system inopa maviri anomhanyisa (nekukurumidza uye anononoka) sarudzo dzekuumbisa-kuvhara uye mould- kuvhura. Zvakare, nguva yekugadzirisa yaderedzwa.
Muchina uyu une seti izere yepakati sisitimu yesimba iyo inogadzirwa nekambani yedu All steam nemhepo izvo zvinodiwa panguva yejekiseni zvinodzorwa nepakati simba system vharuvhu. Iyi sisitimu inozopa kunyangwe yekudyiwa nemhepo uye inogona kugadziridzwa nyore. Iyi yakaderera-yekumanikidza sisitimu sisitimu yakagadzirirwa nemapombi akakurisa uye mavhavha ayo anogona kupa yakanakisa mamiriro ekushanda.
DZIMWE BASA ROKUDZIDZA
Iko kugadzirisa kwesimba kwesimba kwakakosha kwazvo. Pasi pemhepo yakakwira kumanikidza, nguva yekugadzira ichawedzerwa uye inopedza simba rakawanda. Nekudaro, chigadzirwa chekupedzisira chinogona kunge chakaremara uye nechitarisiko chepamusoro chechigadzirwa chinogona kukanganiswa kana kumanikidza kwacho kwakanyanya. Iyo yekuzorodza damper inoshanda painoburitsa chisa uye kudziisa iyo furu. Mhepo yakadzvanywa inoshandiswa kuzadza uye ino damper inoderedza kushandiswa kwesimba uye nekupa mhando yepamusoro chigadzirwa.
YAKABATA-KUFANIRA-KUSIMBISA TANYA REMVURA
Iyo michina yakagadzirirwa imwe seti yekubata yekumanikidza mvura hank iyo ine maviri maviri mapindiro akasiyana ekutonhodza mvura uye condensate.
Iyo yevhisi system yakagadzirirwa neLiquid Ring Vacuum pombi uye condenser iyo inopa inoshanda zvakanyanya vacuity. Pasina imwe nhanho yekuomesa, tinogona kumhanyisa jekiseni pasi pechinhu ichi. Iyo mold ejection iri nyore kupedzwa uye zvakare chengetedza iyo yakawanda simba.
KOMITI YAKADZIDZWA SYSTEM
Uyu jekiseni muchina unoshongedzerwa nekombuta- inodzorwa sisitimu iyo ine mashandiro edhari uye kuwedzera. nhanho yega yega yekushanda iri chaizvo inodzorwa neiyi komputa sisitimu yekukanganisa kuona uye zviratidzo zvinoratidzwa pachiratidziri Mhando yega yega yakaiswa neiyi komputa system inoratidza maitiro, nguva yekumisikidza uye zvakakosha zvekumanikidza kudzora vharuvhu inoisa kumanikidza.
J 可 根据 客户 要求 机型 机型 机型
Tinogona kugadzira muchina zvinoenderana nemutengi wezvinhu zvinodiwa.
Pashure: Auto Rakaumbwa richigadzirisa Machine With Vacuum
Zvadaro: EPP (Yakawedzerwa Polypropylene)